गौतमबुद्ध विमानस्थल युद्धस्तरमा काम : आगामी जेठभित्र उडानयोग्य
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १५:००
भैरहवा, ६ मंसिर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको छ ।
हाल विमानस्थलको धावनमार्गमा धमाधम कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । सो विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार करिब एक किमी धावनमार्गमा पहिलो चरणको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यही गतिमा काम भएको खण्डमा आगामी ४५ दिनभित्र पहिलो चरणको कालोपत्रे काम सकिनेछ । धावनमार्गमा तीन तहको कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चरणको काम सकिएपछि क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरणको कालोपत्रे गर्न १५÷१५ दिनको समय लाग्नेछ ।
विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरिरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु. छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार १२८ रहेको छ ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीले दुई वटा अलकत्रा र गिट्टी घोल्ने यन्त्र जडान गरेर धावनमार्गमा कालोपत्रे गरिरहेको छ ।
स्थलगत निरीक्षणका लागि बुधबार विमानस्थल पुगेका मन्त्री अधिकारीले आयोजना प्रमुख अधिकारीलाई साधे, ‘समस्या के छ, अहिल्यै भनी हाल्नुस् ।’
आयोजना प्रमुखले तत्काल खासै समस्या छैन भन्दै विमानस्थल निर्माणको प्रगतिबारेमा जानकारी गराए । आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘सामान्य रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन केही रकमको अभाव छ, अरु त सबै काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ ।’
धावनमार्ग बनेपछि महत्वपूर्ण पाटो ‘कम्युनिकेसन नेभिगेसन’ उपकरण जडानका लागि समेत बोलपत्र तथा अन्य प्रक्रियागत कामलाई तीव्रता दिइएको छ । बोलपत्रको प्रक्रिया पनि केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्नेछ । विमानस्थलको टर्मिनल भवनको छानो हाल्ने बाँकी काम दुई महिनाभित्र सकिने छ । विमानस्थल परिसरमै रु. एक अर्ब लागतको कार्गो भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाका लागि थप ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म अधिग्रहण गर्न रु. १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । बाँकी अधिग्रहणका लागि रु. ११ अर्ब चाहिनेछ । सञ्चालनमा रहेको धावनमार्गलाई पार्किङस्थल बनाएर निर्माणाधीन धावनमार्ग नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । सन् २०१९ सम्ममा त्यहाँबाट अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गरिनेछ ।
निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनी ग्रुपका परियोजना निर्देशक सुइले पनि विमानस्थल निर्माणमा कुनै पनि समस्या हुन नदिन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको र तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । ‘हामी प्रयत्नशील छौँ, सबै प्रकारको क्षमताको उपयोग गरेका छौं, प्रगति असाध्यै राम्रो भइरहेको छ । यो काम मात्रै होइन नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने अभिभारा पनि हो,’ सुइले भने ।
Tagsगौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना